Nanitatra ny fitondrana fanokana-toerana manokana i Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Nanitatra ny fitondrana fanokana-toerana manokana hatramin'ny 1 Novambra 2021 i Azerbaijan
Voadika ny 10 Septambra 2021 4:17 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, Français, русский, Português, English
“Flame Towers any Baku” avy amin'i wilth, nampiasana lisansa CC BY-NC-SA 2.0
Nanambara ny governemantan'i Azerbaijan tamin'ny 28 Aogositra fa hanitatra ny fitondrana fanokana-toerana manokana izay natomboka tamin'ny taon-dasa, ary ao anatin'ny ezaky ny governemanta hamehezana ny fitomboan'ny isan'ny olona voan'ny COVID-19. Ankoatra izay, hisy ny lalàna vaovao hihatra manomboka ny 1 Septambra.
Araka ny fepetra vaovao, tsy avela hiditra amin'ny toerana mihiboka ny olom-pirenena tsy manana porofo fa vita vaksiny sy tsy manana karam-bakisiny COVID manan-kery, ao anatin'izany ny trano fisakafoana, ny fisotroana kafe, ary ny fivarotan-dehibe. Mihatra amin'ny olom-pirenena rehetra 18 taona no ho miakatra ny famerana. Niteraka filaharam-be tany amin'ny ivon-toerana fanaovana vaksiny ity fanambarana vao haingana ity. Manome alalana ireo tompon'andraikitra mpampihatra lalàna hanara-maso ny kara-baksinin'ny olom-pirenena ary hampandoa onitra ireo izay mandika ireo fepetra vaovao ny fepetra izay hampiharina amin'ny 1 Septambra. Mety iharan'ny onitra hatramin'ny 400 manats (235 dolara amerikana) ny olom-pirenena mandika ny lalàna na samborina, araka ny tatitra nataon'ny Jam-News.
Efa misy ny famerana sasany, ao anatin'izany ny fandrarana ny fampiasana fitateram-bahoaka rehefa amin'ny faran'ny herinandro, ny tsy maintsy hanaovana arovava-orona amin'ny toerana mihiboka, ary ny fepetra takiana amin'ny fanaovana vaksiny rehefa amin'ny lanonam-panambadiana. Hatramin'ny 13 Aogositra, voarara amin'ny fitaterana an-dalamby ireo olom-pirenena misy soritr'aretina.
Nahitana ny fitomboan'ny trangana COVID-19 tao Azerbaijan hatramin'ny fiandohan'ny volana Aogositra. Raha nanamafy ny isan'ny tranga vaovao farany indrindra izay 3.788 i Azerbaijan tamin'ny 31 Aogositra, dia tranga 431 monja no tranga voarakitra tao amin'ny firenena tamin'ny 2 Aogositra, araka ny filazan'ny Masoivohom-baovao Turan.
Amin'izao fotoana izao, vaksiny miisa efatra karazana no ampiasaina any Azerbaijan – SinoVac, Sputnik V, AstraZeneca, ary Pfizer. Tamin'ny 31 Aogositra, vaksiny miisa 6,8 tapitrisa no efa vita, ka olona maherin'ny 2,9 tapitrisa efa nahavita fatra roa ary 4,1 tapitrisa nahazo fatra iray farafahakeliny.
Nandrara ny kara-bakisiny COVID-19 sandoka ihany koa ny manampahefana. Tamin'ny kabary fohy tamin'ny 20 Aogositra, nilaza i Shahmar Movsumov, lehiben'ny Departemanta misahana ny Resaka Ara-toekarena sy ny Fampandrosoana Zava-baovao eo ambany Kabinetran'ny Minisitra, fa fantatry ny tompon'andraikitra fa misy dokotera manome kara-baksiny sandoka ho an'ny marary. Nilaza i Movsumov fa tompon'antoka amin'izany ireo tompon'andraikitra:
Nahazo loharanom-baovao izahay fa manana kara-bakisiny COVID sandoka ireo olom-pirenena voalaza fa nanao vaksiny ary voan'ny coronavirus avy eo. Amin'izao fotoana izao, marary mafy any amin'ny hopitaly manokana izy ireo. Tanana ho tompon'andraikitra ireo dokotera namoaka kara-bakisiny COVID sandoka ankehitriny.”
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny masoivohom-baovao Turan dia nilaza i Aydin Aliyev, mpanao radio fa mety ho misy ifandraisany amin'ny filazan'ny governemanta ny famerana vaovao manomboka ny 1 Septambra no mampitombo ny habetsahan'ny kara-bakisiny sandoka.
Na dia nahavita vaksiny betsaka aza i Azerbaijan raha oharina amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy dia mampiahiahy ny fitomboan'ny isan'ireo tranga vaovao. Voatonona vao tsy ela akory izay ny faritra tamin'ny fanambarana nataon'ny talen'ny Firenena Mikamban'ny Fahasalamana any Eoropa, Hans Kluge, izay nampitandrina fa mety “hampitombo ny enta-mavesatra ho an'ny hopitaly sy ny fahafatesana” ny firongatry ny tranga any Balkans, Kaokazy, ary ireo repoblika Azia Afovoany.
Hatreto, naneho ny fahatokisany ny fotodrafitrasan'ny fahasalamana sy ny fahaizany miatrika ny fitomboan'ny isan'ny tranga ny tompon'andraikitra ao Azerbaijan. Nandritra ny lahateny fohy nataony tamin'ny 20 Aogositra, nilaza i Yagut Karayeva, lehiben'ny Sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina avy amin'ny Fikambanam-pitsaboana amin'ny fizaram-paritany fa vonona ny hampiakatra ny isan'ny fotodrafitrasa manokana ho an'ireo marary voan'ny aretina ny governemanta. Izany hoe: nanamarika i Karayeva fa tsy vita vaksiny ny 96 isanjaton'ny marary niditra hopitaly. Mandritra izany fotoana izany, nanome toky i Shahmar Movsumov fa tsy mihevitra ny hampiditra fepetra fanampiny ny manampahefana.